Warbixin: Qatar Uma Dhutineyso Go’doominta Dalalka Khaliijka…Ogow Sababta – Goobjoog News
Mareykan oo Walaac Ka Muujiyey Doorashada Itoobiya, Akhriso sababta
Mooge Oo Loo Badinayo In Uu Noqdo Maayarka Hargeysa
Dab Khasaaro Geystay Oo Ka Kacay Suuqa Weyn ee Magaalada Boosaaso
Naftali Bennett Oo Loo Doortay Ra’iisul Wasaaraha Cusub Ee Isreal
Aqoon Is-weydaarsi Looga Hadlayey Doorka Haweenka Ee Ka Qeyb-galka Siyaasadda Oo Lagu Qabtay Hobyo
Kooxda Farsamada Doorashooyinka Iyo Xubno Ka tirsan Q.M oo ka Wada-hadlay Doorashooyinka.
Warbixin: Qatar Uma Dhutineyso Go’doominta Dalalka Khaliijka…Ogow Sababta
Dalka Qatar waxaa xiriirkii diblomaasiyadeed u jaray illaa 9 dal, waa dal yar oo dadkiisa lagu qiyaaso 2.7 Milyan, waxaa madax ka ah Amiir Tamiim Bin Xamad oo talada qabtay 2013-kii.
Laga soo bilaabo subaxdii Isniinta markii ay dalalka Imaaraadka, Sacuudiga, Bahrain, Masar iyo Yemen xiriirka u jareen dalkaasi, waxaa ku soo biiray dalal kale sida Libya, Mauritania, the Maldives iyo Comoros kuwaas oo iyaguna si toos ah dalka Qatar ugu jaray xiriirkii diblomaasiyadeed halka Djibouti iyo Jordan ay hoos u dhigeen mataallada xagga diblomaasiyadda, waxaa sidoo kale safiirkeeda u yeertay dalka Senegal.
Dalka Qatar waxaa hadda saxiib ugu dhaw dalalka Kuwait, Iran iyo Turkiga, inta kale dalalka dariska la ah waa ay jareen, walaaca ugu badan waa sidee ku badbaadi karaan dal iyo dad ahaan? Ma heystaan keyd ku filan?
Hadaba, dhaqaalaha dalka Qatar ayaa la sheegayaa in aanu u dhuti doonin go’doominta Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxreyn oo dalalkaasi 3da ah marka la isku daro ay dhigan tahay 10% ganacsiga ay Qatar la wadaagto caalamka intiisa kale.
Marka aad fiiriso dhinaca Tamarta, Qatar waxaa ay ku jirtaa kaalinta 12 keydka gaaska caalamka, waxaa ay kaalinta 1aad caalamka ka tahay wax soo saarka gaaska dareeraha ah.
Dhinaca kale, xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya Khaliijka iyo Qatar waxaa ka badan midka ay Doxa la wagaato caalamka intiisa kale, waxaa ayna carabta oo dhan uga horeysaa suuqa tartanka, horumarka bulsho.
Ganacsiga Doxa iyo Khaliijka dhexmara waxaa uu gaarayaa 10 Bilyan oo u dhiganta 11% halka iskaashiga dhaqaale ee Qatar iyo dunida dhex mara uu gaarayo 89%.
Hadaba Halkan Ka Akhriso, Shaxda Dhaqaalaha Xooggan Ee Qatar:
Sida ay sheegay IMF-ta, wax-soo-saarka dalka Qatar ee sanadkii waa 170 Bilyan oo Dollar, halka dakhliga qof ahaan uu gaarayo 129 kun oo Dollar.
Dalka Qatar keydka xagga Gaaska ah waxaa uu gaarayaa 2.4 trillion cubic feet , dalkan Qatar waxaa heystaa 12% keydka Gaaska caalamka, waxaa ka horreeya dalalka Ruushka iyo Iran.
Gaaska noociisa dareeraha ah ee liquefied natural gas (LNG) Qatar waxaa ay ku jirtaa kaalinta 1aad caalamka iyada oo soo saarta sanadkii 77 million tones.
Dhaqaalaha Qatar kuma tiirsana oo keliya Tamarta ee waxaa ka badan wax soo saarka aan tamarta aheyn, tusaale ahaa dhaqaalaha uu tamarka ka helo dalkaasi waa 39% , waxyaabaha aan tamarta aheynna waa 61%.
Dhaqaalaha Aan Tamarta Aheyn:
Sanduuqa ama hantida ma guurtada ah ee Qatar waxaa lagu qiyaasaa illaa 335 Bilyan oo Dollar.
Mashaariic la xiriirta koobka adduunka waxaa ay ku bixiyeen 98 Bilyan oo Dollar, waxaana la filayaa in sanadkan ay bixiyaan 13 Bilyan oo Dollar.
Dalka Qatar marka la fiiriyo suuqa tartanka, waxaa ay kaalinta 1aad uga jiraan carabta, dunidana kaalinta 13aad.
Horumarka banii’aadamka waxaa ay Qatar ku jirtaa kaalinta 1aad dhanka Carabta halka caalamka ay uga jirto kaalinta 33aad.
Firficoonaanta dhaqaalaha waxaa ay ku jirtaa kaalinta 2aad Carabta halkan dunida ugu jirto kaalinta 12aad.
Xiriirka Ganacsi ee Dunida:
Qatar waxaa ay xiriir ganacsi la leedahay wadamo badan oo caalamka ah sida: Jaban, Hindiya, Shiinaha iyo dalal kale, waxaase dalalka ugu badan ka mid ah:
Jaban: $17.7 Bilyan , Koonfurta Kuuriya: 16.2 Bilyan, Hindiya: 11.2 Bilyan iyo Shiinaha: 8.2 Bilyan oo Dollar
Ganacsiga Doxa iyo Khaliijka dhexmara waxaa uu gaarayaa 10 Bilyan oo Dollar u dhiganta 11% halka dunida iyo Qatar iskaashiga dhaqaale ee dhex mara uu gaarayo 89%.
Dalalka Khaliijka tusaale ahaan haddii aan soo qaadano, Sacuudiga iyo Qatar waxaa dhex mara 1.9 Bilyan oo Dollar, Imaaraadka: 7.1 Bilyan oo Dollar iyo Baxreyn: 0.7 Bilyan oo Dollar.
Qatar iyo Imaaraadka:
Dhankeeda dalka Qatar xiriirka uma jarin Imaaraadka, waxaa jira in Qatar ay Imaaraadka siiso 30% tamarta dalkaasi laga isticmaalo , iyada oo isticmaaleysa subsea pipeline, oo gaaraya 364 kilometers (226 miles) kana soo baxa Ras Laffan oo qatar ah illaa Abu Dhabi ee Imaaraadka, waxaa uu xambaarsan yahay 2 Bilyan cubic feet of gas ah .
Siyaasad ahaan, Sacuudiga waxaa uu wataa shuruudo aad u adag si uu ula heshiiyo dalka Qatar, in kasta oo aan la hubin shuruuradaha saxda ah, laakin dadka wax falanqeeya waxaa ay ku soo koobeen 9 qodob:
Xiritaanka Telefishinka Al-jazeera ama badalidda siyaasadda tifaftirka.
In xiriirka u jaraan Ikhwaanka Musliinta, Xamaas iyo kooxaha kale.
In Xiriirka u jarto dalka Iran
In aaney faragelin siyaasadaha dalalka Khaliijka
In Siyaasadaheeda la Jaan-qaadaan Khaliijka
In ay joojiso Maalgelinta argigixisada
In ay fuliso heshiiska 2014-kii
In Masar faragelinta ka deyso
In la xiraan xisaabaadka Bangiyada ee Xamaas
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalka Ka Socda Gobolka Bari
Golaha wasiirada Oo Meelmariyey Miisaaniyad Sanadeedka 2017
Puntland Oo Baaritaan Bilowday Markii La Soo Afjaray Dagaalkii Afurur
Wixii ka dambeeyey dagaal kii koowaad iyo kii...
Kaydka Goobjoog Select Month June 2021 (60) May 2021 (125) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (365) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
Join 455,442 other subscribers